रविले बोले अर्को झुट, आइजिपीले गरे खुलासा ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/रविले बोले अर्को झुट, आइजिपीले गरे खुलासा !
रविले बोले अर्को झुट, आइजिपीले गरे खुलासा !
काठमाडौं–प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेललाई भेटेका छन्
खनालले शुक्रबार दिउँसो चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका रवि र युवराजलाई भेटका हुन् । भेटका क्रममा खनालले रविलाई असुरक्षित भएको महशुस नगर्न समेत आग्रह गरे । खनालले प्रहरी हिसासतमा कोही पनि असुरक्षित नहुने बताएका थिए । केही दिन अघि रविले पत्नी निकिता पौडेको फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफु हिसातमा असुरक्षित रहेको बताएका थिए । तर, आइजीपिले भने उनलाई हिसारतमा असुरक्षित महसुस नगर्न र महसुस भएमा आफुलाई भन्ने आग्रह गरेका छन् चितवन प्रहरीको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा खनालले हिरासत कक्षको निरीक्षण गरेका हुन् ।
ओली सिंगापुरमा हुँदा प्रचण्ड र नेपाल मिले, खतरनाक योजना बनाएपछि बालुवाटारमा खैलाबैला
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीसँग भनाभन भएको अर्को दिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार निवासमा पुगेका छन् ।दाहाल र नेपालबीच शुक्रबार बिहान गोप्य भेटवार्ता भएको छ । नेता नेपाल बिहान साढे ९ बजे दाहाललाई भेट्न पुगेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । यो भेटमा अर्का नेता जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए ।
ओलीले कार्यकारी अधिकार दिएर उपचार गर्न सिंगापुर गएको भोलिपल्टदेखि नै दाहालले आफ्नो सक्रियता देखाएका छन् ।
बिहीबारको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा ओली र नेपालबीच भनाभन भएको थियो । पार्टीभित्र घटुवामा परेका नेता नेपाललाई दाहालले आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका छन् ।
ओली र नेपालबीच कटुता बढ्दै गएका बेला दाहाल शक्तिशाली बन्ने प्रयासमा छन् । ओली मुलुकमा नभएका बेला दाहालले पार्टीभित्रको समीकरणलाई आफू अनुकूल बनाउन राजनीतिक सक्रियता देखाएको चर्चा छ ।प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली सिंगापुर प्रस्थान गर्नु अगाडि दाहाललाई कार्यकारीको अधिकार दिएका थिए ।